AKHRI: RW CC Muxuu ka yiri dhalinyarada Soomaalida ah ee Hindiya ku xukuntay Dilka… | Kismaayo24 News Agency
AKHRI: RW CC Muxuu ka yiri dhalinyarada Soomaalida ah ee Hindiya ku xukuntay Dilka…
Monday September 26, 2016 - 6:50 under Somali News by Tifaftiraha K24
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka ah Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in Xukuumadd Soomaaliya aysan ku qanacsanayn xukunka dilka ah ee dowladda India ay ku riday dhalinyaradda Soomaaliyeed ,madama aysan helin fursad ay iskaga difaacaan eedaymaha loo soo jeediyey .
“Xukumadda Soomaaliya kuma qanacsano xukunka dowladda India ay ku riday dhaliyaradda Soomaaliyeed ee ku xirnaa xabsiyadda dalkaasi, qof kasta oo bini’aadan ah waxa uu xaq u leeyahay in uu helo xukun ku dhisan Cadaladd, sidaa daraadeed waxaan aaminsanahay in muwaadiniintaas Soomaaliyeed aysan helin Cadaalad maadaama an fursad loo siinin in ay qabsadaan qareeno u doodda ama ka difaaca eedaymaha loo haysto “ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cumar.
Ra’iisul Wasaare SSharmarke ayaa tilmaamay in xukumadu ay kala hadli doonto dowladda India Xukunka ay ku riday dhalinyaradda Soomaaliyeed kuwa ku jira xabsiyadda dalkaasi sidii ay ku heli lahayeen dar-yeel bini aadanimo iyo xukun cadaalad ah .
“ Dowladda India wan kala hadli doonaa dhalinyaradda ku jirta Xabsiyada Dalkaasi sidii ay u heli lahayeen dar-yeel bini aadanimo iyo xukun ku salaysan Cadaaladda ,waxaan sidoo kale la wadaagi donaa in xukumadda Soomaaliya ay aaminsan tahay in xukunkii lagu riday dhalnyaradda Soomaaliyeed uusan ahayn mid Cadaaladda ah, aysana xaq u helin Soomaaliyeed in ay helaan fursad ay isku difacaan”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke ayaa ugu danbayntii xusay in Xukumadda Soomaaliya ay dadaal wayn ku bixinayso sidii ay dhaliyaradda Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyadda Calamka ay u heli lahayeen xukun ku dhisan Cadaalad isla markaana ay qayb ka mid ah xukun kooda ugu qadan lahayeen Xabsiyadda ku yaalla Dalka.